Ukupheka kweKhitshi yiwebhusayithi enikezelwe kwihlabathi le-gastronomy. Apha uya kufumana izitya zoqobo, iiresiphi zeminyhadala ekhethekileyo, njengokuzalwa okanye iKrisimesi. Ayisiyiyo loo nto kuphela, kodwa uya kufumana ulwazi oluninzi malunga nezitya ezisecaleni, iziselo, ukutya kunye neengcebiso zokupheka ngcono.
Amanqaku kunye namacandelo afumanekayo apha ngezantsi abhalwe liqela elinomdla labakhupheli, abafana nawe, abathandanayo nehlabathi lokutya kunye nokupheka. Unokufunda ngakumbi ngabo kwiphepha Iqela labahleli.
Iirobhothi kunye neSmoothies
Iindlela zokupheka ezisecaleni
Izitofu kunye neesobho zokupheka
I-Tapas kunye ne-skewers
Iindlela zokupheka zeCeliac